China tracteur kodiarana roa traktera 10hp mandeha traktera / mandeha ao ambadiky ny traktera amidy Factory sy mpanamboatra | Zhicheng
Traktera mandeha kodiarana 10hp tracteur mandeha / mandeha ao ambadiky ny traktera amidy
tena matihanina amin'ny traktera izahay ary nanondrana tany Polonina, Espana, Kenya, Pakistan, Costa Rica… sns. Ireo kalitaon'ny traktera azo itokisana dia nankasitrahan'ny mpanjifa hatrany, noho izany dia nahazo vondrona mpanjifa betsaka izay matoky ny traktera anay izahay.
Safidio hafa 8hp, 12hp, 15hp, 18hp, 20hp,
Engine marika Changchai, Changfa, Changwu
Hery naoty 7.35kw
Haingam-pandeha (r / min) 2400
Lanja (kilao) 260
Refy (mm) 2120 * 840 * 1160
Hamafazo sakamalaho (mm) 210
maotera Vertical, iray Cylinder, Four Stroke, Diesel
Azontsika atao foana ny manome ny traktera mpanjifa malalantsika amin'ny vidiny tsara indrindra, satria tsy mpanamboatra fotsiny izahay fa manome vidiny ambongadiny ho an'ny mpanjifa, na dia santionany aza. Arakaraky ny andoavanao vola no mora kokoa ny vidiny.
Ireo kojakoja be dia be miaraka amin'ny traktera dia afaka mahafeno ny fepetra takian'ny mpanjifa. Izahay matihanina dia manome ny karazana kojakoja rehetra mifamatotra amin'ny traktera, mba hahafahanay manampy bebe kokoa amin'ny asan'ny fiompianao.
Ny fotoana fandefasana haingana, dia ho mora kokoa amin'ny fanaovan-jiro.
Manana milina amin'ny tahiry sy ny fotoana fandefasana haingana, dia ho mora kokoa amin'ny fanaovan-jiro.
1. fisehoana ivelany natao vaovao tanteraka, izay mahatonga ny traktera ho tsara tarehy kokoa.
2. Zava-kendrena marobe, azo ampifanarahana amina fitaovana am-polony am-polony (tranofiara, mpamboly rotary, trencher, seeder, mpijinja, sns.)
3. Tavoahangy misy solika lehibe, izay mahatonga ny traktera hiasa maharitra.
4. Fandanjana tokana, miasa tsara kokoa ny traktera.
5. Ny solika manokana dia ambany, ny traktera dia miasa ara-toekarena kokoa.
6. Mahay manomboka tsara, mora atomboka.
7. Ny sivana amin'ny fandroana solika dia mahatonga ny traktera mifanaraka amin'ny toe-javatra ratsy.
8. Tohano ny fanaingoana OEM
Teo aloha: Karazana vy tsy misy fangarony ary milina fitrandrahana solika na zaridaina
Manaraka: 12hp mandeha traktera / mandeha ao ambadiky ny traktera / odista mandeha mandeha amin'ny herinaratra
Traktera mandeha 10 Hp
Traktera mandeha 8 Hp
Traktera tanana 10 Hp
Traktera tanana 8 Hp
Traktera mandeha an-tongotra 10 Hp